आर्थिक क्रान्ति हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ: सुजन कार्की » छलफल
आर्थिक क्रान्ति हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ: सुजन कार्की
रामेछाप जिल्ला हालको उमाकुण्ड गाउँपालिकामा वि.सं.२०४९ सालमा जन्मनु भएका सुजन कार्की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं युवा इन्जिनियर हुनुहुन्छ । केही साथीहरूलाई समेटेर राजधानीमा रेष्टुरेण्ट व्यवसाय सञ्चालन गरी सरकारको आर्थिक क्रान्तिको नारालाई व्यवहारमार्फत सिद्ध गरिरहनु भएका सुजन कार्की मेहेनती युवा नेता पनि हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ उहाँसँगको विशेष कुराकानी
सुजनजी अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो संगठन अनेरास्ववियुले अह्राए खटाएका काम गर्नेदेखि राजनीतिक भेटघाट, छलफल र मैले व्यवसाय पनि सञ्चालन गरिरहेकोले त्यसको रेखदेखदेखि प्रमोसनमा पनि लागिरहेको छु ।
के व्यवसाय गर्नुहुन्छ ?
मैले राजधानिका थुप्रै ठाँउमा रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गरिरहेको छु ।
आम्दानी कस्तो छ ?
काम गर्ने साथीहरूलाई धानेको छ ।
कतिले रोजगारी पाएका छन् ?
पाँच सयभन्दा बढी युवा विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा हुनुहुन्छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा अन्य थु्रप्रै साथीहरू जोडिनु भएको छ ।
आफनो संगठनलाई नै आत्मनिर्भरताको सन्देश दिनुभएछ नि ?
संगठनलाई सन्देश दिन होइन संगठनको नीति तथा योजनाअनुसार आम विद्यार्थी साथीहरूलाई आत्मनिर्भरताको माध्यमबाट समृद्धिको यात्रामा लाग्न प्रेरित गर्दै पार्टीको समृद्धिको महाअभियान पूरा गर्न अगाडि बढेको हुँ । यसमा हामी थुप्रै विद्यार्थीहरू छौं ।
तपाईं गौरवशाली संगठनको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । काम के कस्ता छन् के कसरी गरिरहनु भएको छ त ?
हाम्रो संगठन यहाँले भनेजस्तै पूरानो इतिहास बोकेको गर्विलो र सर्वाधिक लोकप्रिय संगठन हो । यसको मुख्य काम विद्यार्थी हकहितका लागि लड्ने, मुलकलाई चाहिने शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्ने, युग सुहाउँदो शिक्षा नीति बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्ने, सुझाव दिने, रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने, शैक्षिक माफियाका विरुद्ध लड्ने, सरकारले देश र जनताको हितविपरीत काम गरेको खण्डमा त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विक्रिति विसंगति हटाउनेदेखि मुलुकको विकास निर्माणमा योगदान गर्ने काम हाम्रो संगठनले योजनाबद्ध ढंगले गरिरहेको छ । त्यसैलाई पूरा गर्ने, संगठनले स्थापनाकालदेखि उठाएका शैक्षिक मुद्दाहरू पूरा गराउन राष्ट्रिय बहस र छलफल आरम्भ गरेका छौं । यिनै कामका साथ संगठनलाई सशक्त बनाउन संगठनले दिएका अन्य कामहरू पनि गरिरहेको छु ।
जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रिया पूरा नहुँदा संगठनका गतिविधि सुस्त हुँदै गएको र संगठन कमजोर हुँदै गएको कुरा सुनिन थालेको छ नि ?
यो संगठन शैक्षिक आन्दोलन र परिवर्तनको वाहक हो । नेपालमा जति पनि आन्दोलन र परिवर्तन भए त्यसमा हाम्रो संगठनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका छ । चाहे २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन होस्, चाहे ४६ सालको आन्दोलन होस् वा ६२/६३ सालको आन्दोलन नै किन नभनौ यी सबै आन्दोलन र संघर्षमा हाम्रो संगठनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यतिमात्र होइन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याउन र हाम्रो माऊ पार्टी हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई यो अवस्थामा ल्याउनका लागि समेत यो संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यसमा लाखांै विद्यार्थीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ । मुलुक हाँकिसकेका, हाँक्दै गरेका र भोलि हाँँक्न तयार रहेका सयौं नेताहरू यो संगठनमा हुनुहुन्छ । त्यसैले गर्दा यो विद्यार्थीहरूको नेता संगठन पनि हो । यसले राजतन्त्र समाप्त गर्नेदेखि गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरामा पनि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । त्यतिमात्र होइन विद्यार्थीको शैक्षिक आन्दोलनमा पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । अहिले हाम्रो पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरू एकताको प्रक्रियामा रहेको र त्यसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हुनाले हाम्रा गतिविधिहरू तुलतात्मक रूपमा केही कम भएका हुन । तथापि राष्ट्रिय इस्युमा हामी चुकेका छैनौ, निरन्तर लागिरहेका छौं । तर संगठन कमजोर भयो पार्टी कमजोर भयो भन्ने कुरा विरोधीहरूको भ्रम हो, त्यो सत्य होइन । बरू हामी दुईवटा संगठन एकताबद्ध भएर बलियो र झन् सशक्त बनेका छौं ।
एकता प्रक्रिया टुंग्याउन पार्टीलाई संगठनले कसरी सहयोग गरिरहेको छ त ?
तल्ला पार्टी कमिटी र जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने पार्टीले कार्यदल बनाएको छ । त्यसलाई सहयोग गर्न र सुझाव दिन सबै जनसंगठनको मुख्य संयन्त्र छ । त्यसले नेता कार्यकर्ताको योग्यता क्षमता, कार्यकुशलता, सक्रियता हेरेर जिम्मेवारीमा लान सिफारिस गर्छ । तिनै कामहरू हाम्रो संगठनले पनि गरिरहेको छ । सर्वाधिक ठूला संगठनहरू एकताबद्ध भएका र यसभित्र हजारौं, लाखांै काबिल नेता, कार्यकर्ता भएकोले, पछि कुनै समस्या संंगठनमा नआओस् भनेर उचित ठाउँमा उचित जिम्मेवारीका साथ साझा मुद्दालाई एकताबद्ध गर्दै व्यवस्थित र सशक्त संगठन निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले पार्टीलाई संगठन एकता प्रक्रियामा केही समय लागेको हो । कुनै समस्या र कमजोरी भएर होइन । जसका लागि संगठनले खटाएका काममा साझा कार्यक्रम अगाडि सारेर हामी सुव्यवस्थित रूपले संगठन निर्माणमा लागिरहेका छौं ।
उत्पादनमा युवालाई जोड्न र शिक्षा नीति राम्रो बनाउन संगठनको योजना के छ ?
अहिले मुलुकमा हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार छ । यहाँसम्म आउन पार्टी र संगठनले थुप्रै हण्डर, ठक्कर,आन्दोलन र संघर्ष गर्नुपरेको छ । अहिलेको उपलब्धि संस्थागत गर्न र जनचाहाना पूरा गर्न आधुनिक शिक्षा नीति, मुलुकलाई आवश्यक जनशक्ति, शैक्षिक बेरोजगारको अन्त्य, सीपमूलक रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सर्टिफिकेट राखेर विनाब्याज ऋण दिने, युवालाई विदेश जान रोकेर स्वदेशमै रोजगारी दिने वातावरण निर्माणदेखि कृषिमा आधुनिकीकरण वैज्ञानिक शिक्षा नीति निर्माण गरेर मुलुकको विकास निर्माण गर्नु पर्छ, त्यसमा हाम्रो संगठन योजनाबद्ध रूपमा लागिरहेको छ । त्यसकालागि शैक्षिक नीतिमा शैक्षिक बहस र छलफल आरम्भ गररेका छौ । त्यसैगरी अन्तराष्टिय शिक्षासँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने र आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्ने जीवन उपयोगी शिक्षा नीति अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसलाई ध्यानमा राखेर संगठनले काम गरिरहेको छ । नीति निर्माणको तहमा त्यसअनुकूलका सल्लाह सुझावहरू दिइरहेको छ ।
तपाईं युवा इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, देशमा इन्जिनियरको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो देश विकासोन्मुख भएकोले ईन्जिनियरिङ पेसाको अवस्था र सम्भावना सबैभन्दा राम्रो छ । त्यसमा पनि हाम्रो मुलुकमा २०७२ सालमा गएको भूकम्पले गरेको ठूलो क्षतिको पुनर्निर्माण तत्कालै गर्नुपर्ने भएकोले यो दक्ष जनशक्तिको ज्यादै खाँचो छ । मुलुक विकासमा अगाडि बढिरहेको र कम्युनिस्ट पार्टीको बलियो सरकार बनेकोले यहाँ थुप्रै बाटाघाटा, पुलपुलेसा, भवन, कम्प्लेक्स, विभिन्न संरचनालगायत हाइड्रोको विकास निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले यो विज्ञता र पेसाको सम्भावना ज्यादै राम्रो छ । यहाँ हजारौं इन्जिनियरको खाँचो छ ।
तपाईं सरकारको नारा समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानअन्तर्गत उत्पादनमा जोडिनु भएको रहेछ, अन्य युवालाई के भन्नुहुन्छ ?
अहिले हाम्रो नेकपाको दुई तिहाईको बलियो सरकार छ । यसले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा अगाडि सारेको छ । समृद्धि उत्पादन नगरी र नबढाई हुँदैन । त्यसका लागि आम युवा विद्यार्थीलाई शिक्षाका साथै उत्पादनमा जोड्नु पर्छ । आय आर्जनमा सबै युवा पंक्तिलाई लगाउनुपर्छ । त्यो काम व्यवहारमार्फत सिद्ध गर्न हामी दुई चारजना युवा विद्यार्थी साथीभाइ मिलेर काठमाडौंका थुप्रै स्थानमा होटल, रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गरेका छांै । उपत्यका बाहिरबाट पढ्नका लागि आएका ५ सय बढी बेरोजगार युवा विद्यार्थी साथीहरूलाई हामीले रोजगारी दिएका छौं । यसबाहेक मैले दुई तीनवटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा पनि लगानी गरेर उत्पादन र समृद्धिको अभियानलाई सहयोग गरिरहेको छु । राष्टलाई पनि आर्थिक रूपमा योगदान गरिरहेको छु । यसले मजस्ता थुप्रै युवालाई यसतर्फ लाग्न उत्प्रेरित गरिरहेको छ । म जस्तैगरी सबै युवाहरू उत्पादनमा जोडिने हो भने मुलुक समृद्ध बन्न र नेपाली सुखी हुन धेरै बेर लाग्दैन ।
तपाईंको रेष्टुरेण्टको स्पेसल के छ, कत्तिको सन्तुष्टि छ ?
यो रेष्टुरेण्टमा सबै वस्तु पाइन्छ । यहाँ सस्तो मूल्यमा क्वालिटीयुक्त अर्गानिक खाना, खाजा र विभिन्न प्रकारका खाद्य पदार्थ यहाँ पाइन्छ । अर्थात कम पैसा भएकाले पनि यहाँ खाना, खान पाउँछन् । सफा सुन्दर वातावरणमा परिवारसँग बसेर सही मूल्यमा सही खाना खान पाउनु महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यो वातावरण मलगायत हाम्रो टिमले जुटाई दिएको छ । यसले गर्दा हुन्छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ, पाँच सात सय युवालाई रोजगारी पनि दिएको छ । यसमा हामी खुसी छाैं, सन्तुष्टि चाहिँ ग्राहकमा भर पर्दोरहेछ किनकी ग्राहक सन्तुष्ट भए भने हामीलाई सन्तुष्टि हुन्छ, नत्र हुन्न । अहिलेसम्मको अवस्थाले सन्तुष्ट नै बनाएको छ ।